Tampico Fiber Tampico ဖိုင်ဘာ (မက္ကဆီကန်ဖိုင်ဘာ) 7cm ထံမှ 25cm အားပူဇော်နိုင်ပါတယ်ဖြီး fiber.We များအတွက်အသုံးပြုသည်။
နံရံအထည်များအတွက်မြင်းအမြီးဆံပင်ထည်ကျနော်တို့အထည်-ချမှတ်ခြင်းနှင့်စက်မှုအလှဆင်အသုံးပြုရန် horsehair ထည်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အထည်တန်းစီဘို့ horsehair ထည်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: က Non-ကျုံ့, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှာကောင်းသော, နူးညံ့မှုနှင့်တောင့်တင်း။ ထိပ်ဆုံးတန်းအဝတ်အစားအောင်များအတွက်အထည်တန်းစီစံပြအရည်အသွေးကောင်း။ မြင်းအမြီးဆံပင်နံရံအထည်နှင့်ဖွဲ့သောအဝတ်ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုစောင့်ရှောက်အတွက်ခိုင်မာသောဆင်းလှသောအစ်မ, အကြမ်းခံခြင်းနှင့်တည်မြဲများမှာ
စက်မှုဇုန်အသုံးပြုရန်မြင်းအမြီးဆံပင်ထည်ကျနော်တို့အထည်နှင့်စက်မှုအလှဆင်တန်းစီဘို့ horsehair ထည်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဒီစာမျက်နှာမှာတော့ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန်အသုံးပြုမှုအတွက်အသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်နှင့် horsehair အထည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းများပုံဥပမာဓာတ်ပုံများမိတ်ဆက်ပေး။
အမျိုးမျိုးသောတိရိစ္ဆာန် Fine ဆံပင်ရောင်း
အမျိုးမျိုးသောတိရိစ္ဆာန် Fine ဆံပင်ကျနော်တို့ process နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအလှကုန်များအတွက်အဓိကအသုံးပြုအဝါရောင်ကြွက်အမြီးဆံပင်, ရက်ကွန်းဝံဆံပင်, bagder ဆံပင်, အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောတိရိစ္ဆာန်ဒဏ်ငွေဆံပင်, ရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။
Bristles ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသော bristle ထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။ Bristles အဓိကအားဖြင့်ဖြီးချမှတ်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ Bristles colors.It အဆိုအရအနက်ရောင် bristle, အဖြူရောင် bristle နှင့်ရောထွေး bristle သို့ခွဲခြားပြုတ် bristle သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်ဆေးကြောမှင်နှင့် bleached နိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းစဉ်၏အကျင့်အတိုင်းမှင်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်ပါစာရင်းပြုစုဖတ်ရှုပါ:
မိုက်ခရိုဖြီးလက်သုတ်ပုဝါနိုင်လွန်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဝှေ့နေတယ်ရှိသည်, ကသင့်ရဲ့သန့်ရှင်းရေးအလုပ်ကိုလွယ်ကူစွာ မှစ. ပြုစေမည်။ Qingdao ဟေ့နေ့စဉ်တုန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ CO, Ltd မှ ကျေးဇူးပြု. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ငါ့ကို
11 - 20 Total 16 (2 pages)